Degmada Rainier Pow Wow (1934-1992) - HistoryLink.org
Degmada Rainier Pow Wow (1934-1992)
Degmada Rainier Pow Wow ee Seattle waxa la aasaasay 1934, iyadoo ah meel maalintoo dhan la joogo, dalxiiska bulshada oo dhami wuxuu ugu talo galay in niyadaha kor loogu qaado laguna hormariyo isku xidhnaanta badhtamihii Dhaqaale Burburkii Waynaa. Sida inaadeerkii, badhtanka magaalada Potlatch-ka Seattle, dhacdooyinku waxay ku luglahaayeen arrimo ganacsi, faan magaalo, raaxo qoys, iyo qalad tarjum dhaqanka Hindida. Potlatch waxay gabagabawday 1941, markii Maraykanku galay Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Laakiin Pow Wow wuu sii socday ilaa 1992, waa muraayad muujinaysa wajiga bulshada oo isbedelaya iyo caalamka ku wareegsan. Dhalashada xilli adag, xafladdu waxay u keentay ganacsi tafaariiqleyaasha deegaanka 1930; wuxuu soo dedejiyey fikrado milatari iyo waddanimo 1940; ku darsantay, “qoyska ugu balladahan” loolankiisa xilligii Dhalashada Carruurta Badan(Baby Boom) 1950dii; kuna jiray “Dagaalkii Kooxaha Muusiga” 1960dii. Loolanadii maydhista quruxda waa laga tagay iyadoo la eegayo cabashooyinka ka imanaya taageerayaasha simista ragga iyo dumarka 1970dii. Boqoraddii Pow Wow iyo ilma boqor waxa loo tagay dhammaadkii 1980dii. Wakhtigii u dambeeyey Pow Wow waa la qabtay, Luulyo 1991, loolanka af dhaqaajinta carruurta yaryar wuxuu ahaa barnaamijka, oo la socoto “fiidyawga is-madadaalinta Karaoke.” Iska isbedeley hal isbeddele ilaa ka xiga, Pow Wow waxay u sii ahaatay bar muhiim ah ee xagaaga jiilal dadka deggen koonfurta Seattle.